Induction isixhobo sokufudumeza | inqanawa yemichiza | i-reator ukufudumeza ubushushu
Ikhaya / izicelo / Induction Ubushushu Reactor / Induction Reactor Ukufudumeza
Induction Reactor Ukufudumeza
Udidi: Induction Ubushushu Reactor tags: Thenga isixhobo sokufudumeza isixhobo, isixhobo semichiza, umxhasi weekhemikhali, inqanawa yemichiza, Ukufudumeza inqanawa yemichiza, induction ubushushu reactor, i-heater reactor, ukufudumeza itanki, Ukufudumeza inqanawa, Ixabiso lesifudumezi, ukufudumeza isixhobo sombane, reator, sombane, ukufudumeza itanki, ukufudumeza isitya
I-Induction Reactor Ukufudumeza-iiMichiza zokuFudumeza
Sinamava angaphezu kwama-20 eminyaka kwi lokutshisa Kwaye siye saqulunqa, sayila, senziwa, safakelwa kwaye sagunyazisa Iinkqubo zokufudumeza umbhobho kunye nemibhobho kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela. Ngenxa yenkqubo yokufudumeza ilula ngokwendalo kwaye ithembekile, ukhetho lokufudumeza ngokungeniswa kufuneka luthathwe njengokhetho olukhethiweyo.
Ukutshisa ubushushu kubandakanya zonke izinto eziluncedo zombane ezithathiweyo ngqo kwinkqubo kwaye ziguqulwe zatshisa kanye apho kufuneka khona. Ingasetyenziselwa ngempumelelo kuyo nayiphi na inqanawa okanye inkqubo yombhobho efuna umthombo wobushushu.
Ukungeniswa kunika izibonelelo ezininzi ezingafumanekiyo ngezinye iindlela kwaye kunika ukuphucula ukusebenza kwemveliso yezityalo kunye neemeko zokusebenza ezingcono kuba akukho bume bubushushu bungqongileyo. Inkqubo ilungele ngokukodwa iinkqubo zempendulo yolawulo olusondeleyo njengokuveliswa kweentlaka zokwenziwa kwindawo eyiNgozi.
Njengoko nganye induction ukufudumeza isitya Sispoke kubathengi ngamnye iimfuno ezithile kunye neemfuno, sinikezela ngobungakanani obahlukeneyo ngamaqondo obushushu ahlukeneyo. Iinjineli zethu zineminyaka emininzi yamava ekuguqukeni kwesiko elakhiweyo zokushushumbisa iinkqubo Uluhlu olubanzi lwezicelo kuluhlu olubanzi lwamashishini. Izifudumezi ziyilelwe ukuhambelana neemfuno ezichanekileyo zenkqubo kwaye zenzelwe ukulungela ngokukhawuleza kwinqanawa nokuba kukwimisebenzi yethu okanye kwindawo.
• Akukho kunxibelelana ngokwasemzimbeni phakathi kwekhoyili yoqheliso kunye nodonga lwenqanawa olushushu.
• Ukuqalisa ngokukhawuleza nokucima. Akukho inertia eshushu.
• Ukuphulukana nobushushu obuphantsi
• Imveliso echanekileyo kunye nolawulo lobushushu benqanawa ngaphandle kokudubula.
• Igalelo lamandla eliphezulu. Ilungele ulawulo oluzenzekelayo okanye lweprosesa encinci
• Indawo ekhuselekileyo yengozi okanye ukusebenza okusemgangathweni kwemizi mveliso kumbane ombane.
• Ungcoliseko lungafudumezi ngendlela efanayo.
• Iindleko zokuqhuba eziphantsi.
• Kusebenza ubushushu obuphantsi okanye obuphezulu.
• Ilula kwaye iyasebenziseka ekusebenzeni.
• Ugcino oluncinci.
• Umgangatho wemveliso ongatshintshiyo.
• Isifudumezi-manzi esinaso kwinqanawa evelisa ubuncinci besithuba esifunekayo somgangatho.
Induction ukufudumeza uyilo coil Ziyafumaneka ukuze zilungele iinqanawa zesinyithi kunye neetanki zeefom ezininzi kunye neemilo ekusetyenzisweni ngoku. Ukuqala ukusuka kwiisentremetres ezimbalwa ukuya kwiimitha ezininzi ubukhulu okanye ubude. Isinyithi esiphakathi, esimbethe intsimbi epholileyo, i-stainless steel solid okanye iinqanawa ezingafakwanga zonke zinokufudunyezwa ngempumelelo. Ngokubanzi kucetyiswa ubukhulu bodonga obungu-6mm.
Uyilo lokulinganiswa kweyunithi ukusuka ku-1KW ukuya kwi-1500KW. Ngeenkqubo zokufudumeza ungeniso akukho mda kwigalelo lokuxinana kwamandla. Nawuphi na umda okhoyo ubekwe bubuninzi bokufakwa kobushushu bemveliso, inkqubo okanye iimpawu zentsimbi zodonga lwenqanawa.
Ukutshisa ubushushu kubandakanya zonke izinto eziluncedo zombane ezithathiweyo ngqo kwinkqubo kwaye ziguqulwe zatshisa kanye apho kufuneka khona. Kuba ukufudumeza kwenzeka ngokuthe ngqo eludongeni lwenqanawa ekunxibelelaneni nemveliso kwaye ilahleko yobushushu iphantsi kakhulu, inkqubo isebenza kakuhle kakhulu (ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90).
Ukufudumeza i-induction kubonelela ngezibonelelo ezininzi ezingafumanekiyo ngezinye iindlela kwaye kunika ukuphucula ukusebenza kwemveliso yezityalo kunye neemeko zokusebenza ezingcono kuba akukho kuphuma kubushushu kwindawo leyo.
Amashishini aqhelekileyo asebenzisa inkqubo yokufudumeza:
• Iicactact kunye neeketile
• Ukuncamathelisa kunye nezinto ezikhethekileyo zokutyabeka
• Imichiza, irhasi kunye neoyile
• Ukugqitywa kwentsimbi kunye nentsimbi
• Ukufudumeza umngundo
• Indibano yeThermal
• Ukomiswa kokutya
• Ukufudumeza imibhobho yamanzi ashushu
• Ukufudumeza itanki kunye neenqanawa kunye nokugquma
Ukucwangciswa kwe-HLQ yokuFakelwa kwe-In-Line Heater kunokusetyenziselwa usetyenziso kubandakanya:
• Ukufudumeza umoya kunye neGesi ngokwenziwa kweMichiza kunye noKutya
• Ukufudumeza ioyile eshushu kwinkqubo kunye neeoyile ezityiwayo
Ukuvaporisa nokushisa kakhulu: Ukuphakamisa umphunga ngoko nangoko, ubushushu obuphantsi kunye noxinzelelo oluphezulu (ukuya kuthi ga kuma-800ºC kwindawo eyi-100 bar)
Iiprojekthi zangaphambili zeenqanawa kunye nezifudumeziweyo eziqhubekayo zibandakanya:
IiReactors kunye neeKettles, ii-Autoclaves, iiVenkile zeNkqubo, ukuGcina nokuHanjiswa kweeTanki, iiBhafu, iiVats kunye neMbiza eziSele zikhona, Izitya zoxinzelelo, iiVapourisors kunye neendawo eziphezulu kakhulu, Isitshisi sokufudumeza, Imigqomo yokujikeleza, imibhobho
Iprojekthi yangaphambili ye-In-Line Heater ibandakanya:
Uxinzelelo oluphezulu lwezifudumezi-moya ezifudumeleyo ezifudumezayo, iiHeater eziHlaziyiweyo zoMoya, ioyile yokuFudumeza iioyile, ioyile edliwayo kunye neeHeater zokupheka ioyile, Izifudumezi zerhasi kubandakanya iNitrogen, iNitrogen Argon kunye neCatalytic Rich Gas (CRG).
Ukutshisa ukutshisa yindlela yokunxibelelana ngokukhetha ukufudumeza izinto zombane ngokusebenzisa izixhobo zombane ezitshintshayo ukwenza amandla ombane, aziwa njenge-eddy yangoku, kwizinto, ezaziwa njenge-susceptor, ngaloo ndlela ifudumeza i-susceptor. Ukutshisa ukufudumeza kusetyenzisiwe kwimveliso ye-metallurgical iminyaka emininzi ngenjongo yokufudumeza isinyithi, umz. Ukufudumeza induction kwenziwa kuluhlu olubanzi lokuhamba, ukusuka kumaza ombane we-AC asezantsi njenge-50 Hz ukuya kuthi ga kumaza amashumi eMHz.
Kwixesha elinikiweyo lokungenisa ubushushu bendawo yokungenisa inyuka xa indlela ende yokuqhuba ikho kwinto. Iziqwenga zomsebenzi oqinileyo zinokufudunyezwa ngamaza asezantsi, ngelixa izinto ezincinci zifuna amaza aphakamileyo. Ukuze ubungakanani obunikezelweyo bushushu, isantya esisezantsi kakhulu sibonelela ngokufudumeza okungafunekiyo kuba amandla kwicandelo lokungenisa avelisi amandla afunekayo kwimisinga eddy kwinto leyo. Ukuhamba rhoqo kakhulu, kwelinye icala, kubangela ukufudumeza okungalinganiyo kuba amandla kwicandelo lokungenisa alingeni ngaphakathi kwinto kwaye i-eddy currents inyanzeliswa kuphela okanye kufutshane nomphezulu. Nangona kunjalo, ukufudumeza ubushushu bendalo obunobumba obunamandla obunqabileyo abaziwa kubugcisa bangaphambili.
Ngaphambi kokuba iinkqubo zobugcisa zesigaba segesi zisabele ngokufuna ukuba i-catalyst ibe nomphezulu ophezulu ukuze iimolekyuli zerhasi ezisebenzayo zibe nokunxibelelana okuphezulu nomphezulu we-catalyst. Iinkqubo zobugcisa zangaphambili zihlala zisebenzisa i-porous catalyst material okanye amasuntswana amancinci e-catalytic, axhaswe ngokufanelekileyo, ukufezekisa indawo efunekayo kumphezulu. Ezi nkqubo zobugcisa zangaphambili zixhomekeke kuhanjiso, kwimitha okanye kwi-convection ukubonelela ngobushushu obuyimfuneko kwi-catalyst. Ukufezekisa ukukhetha okuhle kokuphendula kwamachiza onke amacandelo ama-reactants kufuneka afumane ubushushu obufanayo kunye nokusingqongileyo. Ukuphendula okungapheliyo, inqanaba lokuhanjiswa kobushushu ke ngoko kufuneka lifane ngokufanayo nakwivolumu yonke yebhedi yokuthambisa. Zombini ukuqhuba, kunye nokuhambisa, kunye nokusasazeka ngemitha, kuthintelwe ngokwendalo kumandla abo okubonelela ngenqanaba elifanelekileyo kunye nokufana kokuhanjiswa kobushushu.
I-GB Patent 2210286 (i-GB '286), eqhelekile kubugcisa bangaphambili, ifundisa ukunyusa amasuntswana amancinci e-catalyst angasebenzi ngombane kwinkxaso yentsimbi okanye ekunyanzeni i-catalyst ukuyenza iqhubeke ngombane. Inkxaso yentsimbi okanye izixhobo zokwenza iziyobisi kukufakwa ngokufudumeleyo kwaye emva koko kutshise ikhathalogu. Le patent ifundisa ukusetyenziswa kwesiseko se-ferromagnetic esidlula embindini kwibhedi ye-catalyst. Izinto ezikhethiweyo zesiseko se-ferromagnetic yintsimbi yesilicon. Nangona iluncedo ekuphenduleni ukuya kuthi ga kwi-600 degrees C., izixhobo ze-GB Patent 2210286 zinengxaki yokusikelwa umda kumaqondo aphezulu obushushu. Ukuqina kwemagnethi yesiseko se-ferromagnetic kuya kuthoba kakhulu kumaqondo aphezulu obushushu. Ngokuka-Erickson, CJ, "Incwadana yokufudumeza uMzi-mveliso", iphe-84-85, amandla e-magnetic aqala ukuhla ngo-600 C kwaye ahambe ngo-750 C. Ukusukela oko, kulungiselelo lwe-GB '286, amandla kazibuthe Intsimi ebhedini ye-catalyst ixhomekeke kubume bemagneti yesiseko se-ferromagnetic, olo lungelelwaniso alunakufudumeza ngokufanelekileyo ubushushu kumaqondo obushushu angaphezu kwe-750 C, mayingafikeleli ngaphezulu kwe-1000 C efunekayo kwimveliso ye-HCN.
Izixhobo ze-GB Patent 2210286 ikholelwa ukuba ayifanelekanga ngokwemichiza yokulungiselela i-HCN. I-HCN yenziwa ngokuphendula kwe-ammonia kunye negesi ye-hydrocarbon. Kuyaziwa ukuba isinyithi sibangela ukubola kwe-ammonia kumaqondo aphezulu obushushu. Kukholelwa ukuba isinyithi esikhoyo kumbindi we-ferromagnetic kunye nenkxaso yokuxhasa kwigumbi lokuphendula le-GB '286 kunokubangela ukubola kwe-ammonia kwaye kuthintele, endaweni yokukhuthaza, impendulo enqwenelekayo ye-ammonia enehydrocarbon ukwenza i-HCN.
IHydrogen cyanide (HCN) yimichiza ebalulekileyo enokusetyenziswa okuninzi kwimizi-mveliso yeekhemikhali kunye neyezimayini. Umzekelo, i-HCN yinto ekrwada ekwenziweni kwe-adiponitrile, i-acetone cyanohydrin, isodium cyanide, kunye ne-intermediates ekwenziweni kwezibulali zinambuzane, iimveliso zezolimo, iiarhente zokukhohlisa kunye nokutya kwezilwanyana. I-HCN lulwelo olunetyhefu olunamaqondo abilayo kuma-26 degrees C, kwaye ngenxa yoko, luxhomekeke kwimigaqo engqingqwa yokupakisha kunye nokuhamba. Kwezinye izicelo, i-HCN iyadingeka kwiindawo ezikude ezikude kumaziko amakhulu emveliso ye-HCN. Ukuhanjiswa kwe-HCN kwezi ndawo kubandakanya iingozi ezinkulu. Ukuveliswa kwe-HCN kwiindawo eziza kusetyenziswa kuzo kuya kuthintela iingozi ekuhlangatyezwane nazo ekuthuthweni, ekugcinweni nasekuphatheni. Imveliso encinci kwisiza se-HCN, kusetyenziswa iinkqubo zobugcisa zangaphambili, ayinakuba nakho ukubakho kwezoqoqosho. Nangona kunjalo, isikali esincinci, kunye nenqanaba elikhulu, ukuveliswa kwesiza kwe-HCN kuyenzeka ngokobuchwephesha nakwezoqoqosho kusetyenziswa iinkqubo nezixhobo zolu lwakhiwo lukhoyo ngoku.
I-HCN inokuveliswa xa iikhompawundi eziqulethe i-hydrogen, i-nitrogen, kunye nekhabhoni zidityaniswa kumaqondo aphezulu obushushu, kunye okanye ngaphandle kwento evuselelayo. Umzekelo, i-HCN yenziwa ngokusabela kwe-ammonia kunye ne-hydrocarbon, impendulo ephezulu kakhulu. Iinkqubo zorhwebo ezintathu zokwenza i-HCN ziiBlausaure aus Methan und Ammoniak (BMA), iAndrussow, kunye neenkqubo zeShawinigan. Ezi nkqubo zinokwahlulahlulwa ngendlela yokuvelisa ubushushu kunye nokudlulisa, nokuba ngaba kuqeshwe isixhobo sokunceda.
Inkqubo yeAndrussow isebenzisa ubushushu obuveliswa ngumlilo wegesi yehydrocarbon kunye neoksijini ngaphakathi kwevolumu yereactor ukubonelela ubushushu bokusabela. Inkqubo ye-BMA isebenzisa ubushushu obuveliswa yinkqubo yomlilo wangaphandle ukufudumeza umphezulu wangaphandle weendonga ze-reactor, ethi yona itshise umphezulu wangaphakathi weendonga ze-reactor kwaye ke oko kubonelele ngobushushu bokuphendula. Inkqubo ye-Shawinigan isebenzisa umbane ohamba ngokuhamba ngee-electrode kwibhedi enamanzi ukubonelela ubushushu bokusabela.
Kwinkqubo yeAndrussow, umxube wegesi yendalo (umxube wegesi yehydrocarbon ephezulu kwimethane), iammonia, kunye neoksijini okanye umoya kuyasetyenzwa phambi kweplatinam. I-catalyst ihlala ineziqendu ezininzi zeplatinamu / i-rhodium yocingo yocingo. Ubungakanani beoksijini bunje ngokutsha komlilo kwezixhobo zokubonelela zinika amandla awoneleyo okucoca ubushushu obusebenzayo ngaphezulu kwe-1000 ° C. kunye nobushushu obufunekayo bokuphendula kuyilo lwe-HCN. Iimveliso zokuphendula zi-HCN, H2, H2O, CO, CO2, kwaye zilandelele inani le-nitrites ephezulu, ekufuneka ke yahlulwe.
Kwinkqubo ye-BMA, umxube we-ammonia kunye ne-methane zihamba ngaphakathi kwiityhubhu zeceramic ezingenayo i-porous ezenziwe ngezinto ezinobushushu obuphezulu. Ngaphakathi ityhubhu nganye igcwele okanye ifakwe amaqhekeza eplatinam. Iityhubhu zibekwa kwiziko lobushushu eliphezulu kwaye zifudunyezwa ngaphandle. Ubushushu buqhutywa ngodonga lweceramic kumphezulu wokudibanisa, oyinxalenye yodonga. Impendulo iqhutywa ngo-1300 ° C. njengoko ii-reactants zinxibelelana ne-catalyst. Ubushushu obushushu obufunekayo buphezulu ngenxa yokuphakama kobushushu obusabelayo, ubushushu obukhulu bokusabela, kunye nenyani yokuba ukupheka komphezulu womhlaba onokubakho kunokubakho ngezantsi kobushushu bokusabela, obususa i-catalyst. Kuba ityhubhu nganye i malunga ne-1 ″ ubukhulu, inani elikhulu leetyhubhu liyafuneka ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zemveliso. Iimveliso zokuphendula zii-HCN kunye ne-hydrogen.
Kwinkqubo ye-Shawinigan, amandla afunekayo ekuphenduleni komxube oqukethe ipropane kunye ne-ammonia unikezelwa ngumbane wombane ohamba phakathi kwee-electrode ezifakwe kwibhedi enamanzi engenazo i-coketic coke. Ukungabikho kwe-catalyst, kunye nokungabikho kwe-oksijini okanye umoya, kwinkqubo ye-Shawinigan kuthetha ukuba impendulo kufuneka iqhutywe kumaqondo aphezulu kakhulu, ngokuqhelekileyo ngaphezu kwe-1500 degrees C. Ubushushu obuphezulu bufuna iindawo ezinzima ngakumbi izixhobo zokwakha zenkqubo.
Ngelixa, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, kuyaziwa ukuba i-HCN inokuveliswa ngokuphendula kwe-NH3 kunye negesi ye-hydrocarbon, enje nge-CH4 okanye i-C3H8, phambi kweqela le-Pt lesinyithi sentsimbi, kusekho isidingo sokuphucula ukusebenza iinkqubo ezinjalo, kunye nezinye ezinxulumene noko, ukuze kuphuculwe uqoqosho lwemveliso yeHCN, ngakumbi kwimveliso encinci. Kubaluleke ngokukodwa ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokuqhamka kwe-ammonia ngelixa kusandiswa izinga lokuveliswa kwe-HCN xa kuthelekiswa nenani lezinto ezinqabileyo zentsimbi ezisetyenzisiweyo. Ngaphaya koko, i-catalyst akufuneki ichaphazele imveliso ye-HCN ngokukhuthaza iimpendulo ezingathandekiyo njengokucofa. Ngapha koko, kuyacelwa ukuba kuphuculwe umsebenzi kunye nobomi bezinto ezisetyenziswayo kule nkqubo. Ngokucacileyo, icandelo elikhulu lotyalo-mali kwimveliso ye-HCN likwiqela leplatinam. Uyilo lwangoku lutshisa i-catalyst ngokuthe ngqo, kunokuba ngokungathanga ngqo njengakwi-art yangaphambili, kwaye ke oko kuzalisekisa le desiderata.
Njengoko bekuxoxiwe ngaphambili, isantya esisezantsi sokufudumeza ubushushu saziwa ngokubonelela ngokufana kokuhanjiswa kobushushu kumanqanaba aphezulu ombane kwizinto ezinendlela ende yokuhambisa umbane. Xa unikezela amandla okuphendula kwisigaba sokugqibela segesi yokuphendula, ubushushu kufuneka buhanjiswe ngqo kwi-catalyst kunye nelahleko yamandla encinci. Iimfuno zokuhanjiswa kobushushu obufanayo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kwindawo ephezulu yommandla, indawo enokubangela irhasi ebonakala ngathi iyangqubana namandla okufudumeza ngokungenisa. Uyilo lwangoku lusekwe kwiziphumo ezingalindelekanga ezifunyenwe ngoqwalaselo lwe-reactor apho i-catalyst inefomathi yolwakhiwo lwenoveli. Le fom yolwakhiwo idibanisa amanqaku e: 1) ubude bendlela yokuhamba yombane, esebenza ngokukuko ukufudumeza okusebenzayo ngokuthe ngqo kwe-catalyst ngendlela efanayo, kunye ne-2) indawo enendawo ephezulu; ezi mpawu ziyasebenzisana ukuququzelela ukusabela kweekhemikhali zokuphela komzimba. Ukusilela ngokupheleleyo kwentsimbi kwigumbi lokuphendula kuququzelela ukuveliswa kwe-HCN ngokuphendula kwe-NH3 kunye negesi yehydrocarbon.
Ukungenisa izixhobo zokufudumeza iimpahla
ukufudumeza izixhobo zamakhemikhali